Emails takhalusid ka iPhone ma aha hawl aad u dhib kuwa lagu isticmaalaya waxyaabaha Apple muddo ah. Taas lidkeeda, geeddi-socodka waxay noqon karaan kuwo adag ee isticmaala iPhone cusub. Qaybtan waxa uu sharaxayaa sida aad ka saari kara emails, xisaab email, voicemails iyo jiidho ka iPhone in hab fudud oo toos ah.
In erayada fudud, qaybtan uu sharaxayaa sida aad maamuli kartaa wax walba oo la xiriira emails iyo voicemails aad iPhone.
Qaybta 1. Sida loo Delete Email Accounts ka iPhone
Takhalusid account email ah ka iPhone u baahan tahay tallaabooyinka ka yar marka loo eego ku daray akoon cusub waa in. Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamo ku saabsan sida loo tirtiri account email ah ka iPhone waa sida soo socota:
Tuubada Settings icon ka screen Guriga.
Laga soo bilaabo Settings uu furmo, hel oo ka jaftaa Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Laga soo bilaabo Mail, Xiriirada, suuqa kala Kalandarada , ka jaftaa magaca adeeg bixiyaha xisaab email aad in aad rabto in aad tirtirto ka. (Gmail mudaaharaad this.)
On suuqa kala socda, ka jaftaa Account tirtirto .
Laga soo bilaabo sanduuqa xaqiijin dabamariyay kor, tuubada Delete ka My iPhone.
Haddii loo baahdo, guuleysatey aad iPhone.
Qaybta 2. Sida loo Delete Emails Multiple ka iPhone
Haddii aad mailkooda waxaa overpopulated la fara badan mails la rabin oo aan waxtar lahayn, waxa uu noqonayaa mid loo baahan yahay inuu iyaga ka dhaqaajiyo si ay u sii email account iyo mailkooda aad nadiif ah. Soo saarida email qof ka mid ah mar uu noqon doono hab waaqici oo noqon doono mid aad u daalin iyo waqti aad. Si aad u soo kabtaan, iPhone kuu ogolaanaya in aad ka saarto emails badan in go hal. Waxaad meesha ka saari kartaa emails badan adigoo raacaya tilmaamaha hoos ku siiyo:
Laga soo bilaabo screen Home aad iPhone, hel iyo tubbada Mail icon.
On the jiidho uu furmo suuqa, tuubada All Inboxes doorasho si aad u eegto emails ka degay ee inboxes ee xisaabaha email aad ku daray in aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku daray kaliya hal xisaab email, ama haddii aad rabto in aad ka saarto badan emails ka xisaab gaar ah, magaca adeeg bixiyaha email ay ku jirto xisaabtaada ka jaftaa.
Laga soo bilaabo All Inboxes uu furmo suuqa, dhankiisii ​​top-xaq, ka jaftaa Edit .
Tubada in ay doortaan oo dhan emails aan la rabin in aad rabto in aad soo saarto ka iPhone.
Marka la doortay, ka jaftaa Trash ka geeska midig ugu hooseysa interface ah si loo saaro emails oo la soo doortay.
Qaybta 3. Sida loo ka iPhone Delete Voicemails
Voicemails keeni kartaa jebinta ammaanka gaar ahaan goobaha wax soo saarka. Si loo hubiyo in aad macluumaadka xasaasiga ah ayaa weli xaqiijisatay, waxaa muhiim ah in ay tirtirto voicemails ka kooban walax muhiim ah ka iPhone sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo raacaya tilmaamaha hoos ku qeexan:
Daar aad iPhone.
Tuubada Phone icon ka screen Home aad iPhone.
Laga soo bilaabo geeska midig hoose ee suuqa kala furay, ka jaftaa farriinta .
Laga soo bilaabo interface furay, ka jaftaa iyo mari farriinta codka ah aan la rabin.
Marka Delete button (goobada cas oo u muuqata) jaftaa badhanka si meesha looga saaro farriinta codka ah.
Qaybta 4. Sida loo Delete boostada ka iPhone
Takhalusid boostada ka iPhone ah waa mid fudud ilaa iyo inta aan ka mid yahay default ah. Waxaad raaci kartaa fariimaha tallaabo-tallaabo hoos ku siiyey in ay tirtirto boostada ah in aad abuuray gacanta:
Hubi in aad iPhone waxaa ku shaqeeya on.
Laga soo bilaabo screen Home aad iPhone, tuubada Mail icon.
Laga soo furay jiidho uu furmo suuqa, oo ka soo hoos xisaab qaybta, ka jaftaa adeeg bixiyaha email la xisaab email ka meesha aad rabto in aad tirtirto boostada. (Gmail halkan mudaaharaad.)
Laga soo bilaabo suuqa kala socda soo baxa, ka jaftaa Edit dhankiisii ​​top-xaq.
Marka sameeyo, ka jaftaa boostada in aad rabto in aad tirtirto.
Laga soo bilaabo Edit boostada uu furmo suuqa, tuubada Delete boostada iyo xaqiijin tallaabo marka ay keentay in si ay u tirtirto boostada la rabin ka iPhone.
Haddii deegaan kasta oo shirkadaha ama guriga, qof walba ayaa wajahaya xaalad sifaynta emails iyo voicemails ka iPhone uu noqonayaa mid aad u muhiim ah. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonayaan in ay tirtirto ku jiidho oo dhan ama xitaa xisaab email ee la xidhiidha ka iPhone wadajir ujeedooyin ammaanka.
Haddii aad u malaynayso in ay jiri doonto cawaaqib haddii xogta shakhsiga ah uu ka qaadaan dad kale, bet ugu fiican ee aad noqon lahayd in ay ka iPhone saarto xogta sida ugu dhaqsaha badan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad hubisaa inaad dib dhan macluumaadka ka hor inta tirtiro. Tani waa muhiim sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dib u hesho xogta aad, iyo soo celinta xogta tirtiray kaga imaanayo waa hab sahlan in ay sidaa sameeyaan.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Emails ka iPhone